Home > Bussiness Lists > LINN DEE PA Service Co.,Ltd
LINN DEE PA Service Co.,Ltd
Catering Service ::Linn Dee Pa Serves food which is not only delicious and also nutritious an complete meal that includes necessary vitamins and proteins.
Nowadays catered food in schools and offices are greasy and unhealthy. Keeping this in mind, LINN DEE PA has extended their ideology of healthy eating to this services and provides delicious and well-balanced meals.
Security Service ::Founded in 2018, LINN DEE PA Service Co.,Ltd set out itself to bealeading contract security firm the property, corporate ,industrial and commercial and construction industries.
House Keeping Service ::Most of our experience has gained subcontracting forabig company and now, we have decided to create direct relationships with clients, to offer themamore personalized service and more efficient costs while eliminating intermediaries. Each and everyone one of our professional cleaners is thoroughly trained and insured and bonded has each successfully completed all of the necessary safety training involved.
LINN DEE PA Service မှ အစားအသောက်နှင့် ထမင်းဘူးများ ပို့ဆောင်တည်ခင်းရောင်းချရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော လတ်ဆတ်သည့် အသီးအနှံနှင့် အသားငါးများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။LINN DEE PA Service မှ ရေတို ရေရှည် စားသုံးသူအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးကို အထူးအလေးပေးထား၍ အရသာထူးကဲကောင်းမွန်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အသား၊ ငါးမစားသော( အသီး အရွက်သီးသန့်) စားသုံးသူများအတွက် သက်သက်လွတ် ဟင်းလျာများကိုလည်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။LINN DEE PA Service မှ တည်ခင်း၊ ပို့ဆောင်ရောင်းချပေးသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဟင်းလျာများအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မှာယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
LINN DEE PA Service လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းဆီ၌ လုံခြုံရေးနှင့်ပက်သက်သော သင်တန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအလိုက်အဆင့်ဆင့်တက်ရောက် သင်ကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု၊ တိကျမှန်ကန်သော တာဝန်ကျေမှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖျတ်လတ်တက်ကြွစွာ စိတ်ဝင်တစားဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ငှါးရမ်းသူ လူကြီးမင်းများအား အထူးအလေးပေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။LINN DEE PA Service မှ လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်အဆောက်အဦးကိုမဆို လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းများဖြင့် လချုပ်ငှါးရမ်းမှုများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ချုပ်ငှါးမှုများဖြင့်သော်လည်းကောင်း ချိုသာသောဈေးနှုန်းနှင့် အပြည့်အဝရစေနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။
LINN DEE PA Service မှဝန်ထမ်းများသည် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသောဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အသုံးချchemical ပစ္စည်းများအနေဖြင့် Ecolab Myanmarမှ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသော chemical ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်
Phone Number: 09960277588
Member since : 2019 Apr
Main Products : Catering,Security,House Keeping